बच्चाका अगाडि आमाबुबाले ख्याल गर्नुपर्ने ७ कुरा – आफ्नो समाचार
obhandari — १८ माघ २०७४, बिहीबार ००:४६0comment
के तपाईं बच्चाको बाबुआमा हुनुहुन्छ । तपाईकै व्यवहारको कारण तपाईको बच्चामा शारिरीक र मानसिक विकासमा असर परेको हुनसक्छ । त्यसका लागि हरेक बाबुआमा सचेत हुन जरुरी छ ।
धेरै बाबुआमाले बच्चालाई स्कुल लैजाँदा स्कुलको ब्याग र टिफिन आफैले बोकिदिने चलन छ । बच्चा पाँच वर्षको भएपछि झोला बोक्ने काम तत्कालै छाड्नु पर्छ । जति गर्‍हौ भएपनि झोला उसैलाई बोकाउनुपर्छ ।
बाटोमा हिँडदा हात समातेर यता आइज भन्ने होइन । कुन साइड हिँड्ने भनेर उसैलाई सोध्नु त्यसो गर्दा कुन साइड हिँड्नुपर्छ उसैले भन्छ ।
धेरै अभिभावकले वच्चा ठूलो हुँदासम्म चम्चाले भात खुवाउने गर्छन् । पाँच वर्षपछि बच्चालाई भात खुवाउन छाड्नुपर्छ । एक दुई दिन भोकै गएपनि फरक पर्दैन ।
स्कुलवाट आएपछि आफैले ड्रेस खोल्दिने काम गर्नुहुन्न । डे्रस जुत्ता, मोजा र टाई उसैलाई राख्न दिनुपर्छ । कुन धुनुपर्ने कुन धुन नपर्ने उसैलाई छुट्याउन दिनुपर्छ ।
अर्को कुरा उपहार दिँदा छोरालाई एरोप्लेन र छोरीलाई भाँडाकुटी दिने चलन छ यस्तो कहिल्यै गर्नु हुँदैन । बच्चालाई पेस्तोल कहिल्यै उपहार नदिनुस् । किन्दिँदा पनि नकिन्दिनुस् ।
यदि सम्बन्ध बिच्छेद गर्नु छ भने । पहिला बच्चालाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यो सोचेर मात्रै सम्बन्ध बिच्छेदका लागि पहल गर्नुस् ।
२. बालबलिकाका समस्या समान हुन्छन्
बच्चालाई मोबाइल दिनु छ भने निश्चित समयका लागि दिनुपर्छ । होमवर्क गरी भ्याएपछि, भात खाएपछि वा अरु त्यस्तै सर्त राखेर १०/१५ मिनेट चलाउन दिँदा राम्रो हुन्छ ।
काठमाडौंको वातावरण र हाम्रो समाज अहिले वालवालिका मैत्री छैन । काठमाडौमा वल्लो कोठा र पल्लोकोठामा बस्नेवीच बोल्ने चलन हुँदैन । फ्ल्याटमा बस्नेहरुको पनि समस्या त्यही नै हो ।
दुबै कोठा वा फ्ल्याटमा एउटै उमेरका बच्चा हुन्छन् तर, आमा- आमाको झगडाको कारण पनि ती वालवालिका एक अर्कासंग बोल्न पाउँदैनन् । त्यसले पनि उनीहरुमा समस्या आउछ । बच्चालाई छिमेकी अन्टीले केही खान दिइन् भने त्यहाँ जान मन लाग्छ । तर, कतिपय बाबुआमा त्यसरि अरुकोमा गएर खान हुन्न भनेर बावालिकालाई अरुको जान दिँदैनन् ।
काठमाडौमा असाध्यै धेरै क्राउड छ । खेल्ने ठाउँ छैन । खेल्न नपाएपछि बच्चाको शारीरिक विकासमा असर पर्छ । सबैभन्दा जरुरी कुरा खेल हो । यसले शारीरिक मात्रै हैन, मानसिक विकासमा पनि असर पार्छ ।
अचेल बाबुआमाले गर्नुपर्ने भन्दा बढी केयर गर्छौं । खेल्न हुन्न लडिन्छ , धुलोमा खेल्न हुन्न भन्छौं । यो गलत हो बच्चालाई धुलोमा खेल्न दिनुपर्छ । लड्न दिनुपर्छ । लडेपछि नै उठ्न जान्दछ । धुलो लागेपछि नै धुलो टक्टक्याउन जान्दछ ।
कतिपय बाबु आमा आफ्ना बच्चालाई चेपारे पारेर बोल्छन् मेलो बाबा, मेलो नानु । बच्चाले त्यही सिक्छ । अलि ठूलो भएपछि बाबुआमाले आफै भन्छन् कस्तो लाडिएर बोलेको ? त्यसकारण बच्चाले तोते बोली बोल्यो भन्दैमा आफु पनि लाडिएर नबोल्नुस् ।
हरेक बच्चाले अढाई वर्ष भएपछि सबै कुरा बुझ्छ । त्यसकारण बच्चा साढे दुई वर्षको भएपछि एउटै बेडमा श्रीमान श्रीमतीवीच सेक्सुअल रिलेशन राख्नु राम्रो मानिँदैन । किनकि बच्चाहरुले थाहा पाए पनि त्यस्ता कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् । तर, पछि समस्या आउन सक्छ ।
घरमै साथीहरु जम्मा पारेर मदिरा खाने तर, बच्चा आयो भने ‘तिमी किन यहाँ उता जाउ’ भनेर हप्काउने चलन छ । घरमा कहिल्यै वालवालिकाको अगाडि धुम्रपान मध्यपान गर्नुहुन्न । ती कुराहरु पूरै बन्द गर्नुपर्छ ।
(मनोविज्ञ थापासँग कुराकानीमा आधारित)
सोलुखोला दुधकोसी जलविद्युतको काम ३ महिना देखि ठप्प
अस्थायी शिक्षकको नतिजा ‘कन्तविजोग’